Fofona vita amin'ny tavoahangy misy vy ary famokarana vy mamoaka vy
Home / Induction Melting Furnace / Fitrandrahana vy / Lafaoro fandrendreham-by
Sokajy: Electric Furnace, Fandoroana fanalefahana amin'ny famokarana tavy, Induction Melting Furnace, Afo Fandoroana vy, Fitrandrahana vy Tags: mividy lafaoro vy, miorina amin'ny vy, fantsom-bozaka vy, fantsom-bozaka vy, fantsom-bozaka vy, fantsom-bozaka vita amin'ny vy, ny vidin'ny vy, vy, fofona vy, fantsom-bozaka fanariana vy, fofona afon-drivotra vy
Fitrandrahana vy mamelana vy |
1) Fandefasam-bozaka fanenon-driaka vy amin'ny alàlan'ny famoahana vy amin'ny alàlan'ny famonoana
3.Usage: Ny haavon'ny hafanam-pandehan'ny hafanana matevina dia ampiasaina amin'ny vy, vy, varahina, aliminioma sy legioma, avo lenta, tsara ny vokatra mitahiry herinaratra, tsara ny singa fitambaran'ny metaly, ny fatiantoka mirehitra, ny fikolokoloana haingana, ny fanaraha-maso mora foana Azo ampiasaina amin'ny karazana metaly rehetra.
Ny fahaverezan'ny indostrialy ny famoahana indostrian'ny vy matevina dia mampiseho ny 25% amin'ny hery rehetra, noho izany dia tena manan-danja tokoa ny famolavolana sy ny rafi-pandaminana. Rehefa mamolavola ny kodiarana, dia alainay ny TU1 varahina avo lenta amin'ny alimine varahina, ary ny fiaraha-miombon'antoka dia manosotra lamosina volafotsy be, izay manana fitondran-tena ambony sy fahaverezana kely. Mba hahazoana antoka ny fandrefesana tsara indrindra, ny fitaovana fanondan-dàlana dia apetraka eo anelanelan'ny tapa-bolana;
Lafaoro fandrendrehana vy manapotsitra lafaoro amin'ny alàlan'ny tadio sy ny sisiny manarona fandrakofana lafaoro, arofanina vovoka (peratra) amin'ny alàlan'ny rivotra sasany mifoka vovoka, etona mandrehitra nateraka tamin'ny fandrendrehana, nahatratra ary nanatsara ny vokatry ny famoahana setroka, mba hahafeno ny fepetra takian'ny fiantraikan'ny tontolo iainana famolavolana fanombanana.
※ Ny habetsaky ny fantsom-pandrefesana vy amin'ny alàlan'ny vy dia mifototra amin'ny haavon'ny vy 7.8 (ny alim-by dia ny 2.7, noho izany ny aliminian'ny lanjany mitovy: ny hery mifanaraka aminy dia mitovy, ary ny fahafaha-mitaky x 3 indraindray ny vatan'ny fatana )
Orinasa mpitrandraka volamena
Aluminium Cans Afo Afo